Njani Indlela Umfazi ongazange kuhlangatyezwana nazo Phambi
Xa ubona i-nabafana kubekho inkqubela ufuna indlela, into yokuqala ufuna ukwenza ngu ukwenza iliso uqhagamshelane. Ukuba yena ikhangeleka phezulu kwaye catches yakho gaze, ibamba ukuba lingqina uqhagamshelane kwaye kuyinikela a relaxed ncuma. Oku kuya kukunceda wenze okulungileyo kuqala impression kwi kubekho inkqubela ngokubonisa nisolko a uqinisekile, eyobuhlobo guy. Ngoku, ukuba yena uba ukuba lingqina uqhagamshelane (okanye ukhangeleka kude kwaye kwangoko emva kwi nani) yena ke inika kuwe umqondiso yena ke anomdla kwaye ke isimemo ukuba indlela. Sukulinda kuba naliphi na isimemo, njengoko oku kusenokwenzeka ukuba eyona obvious isibonisi inzala yena uya kunika. Nangona kunjalo, ukuba yena akuthethi ukuba bamba yakho gaze – okanye zange ikhangeleka yakho icala ukwenza iliso uqhagamshelane, musa worry. Kusekho plenty ungayenza ukuqala incoko kunye umfazi awuyazi. Ngoku, elungileyo habit ukuba ingaba kwi-approaching abafazi kukuba soloko bahamba ukuya kwi-umfazi nisolko anomdla ilungelo kude.
Endaweni yoko, baye get oxhalabileyo malunga approaching umfazi kwaye insist kwi ilinde”ilungelo mzuzu”(apho zange iza). Kodwa ukuba unayo nayiphi na indlela anxiety xa ehamba ukuya kwi-umfazi, ulinde jikelele kuba”ilungelo mzuzu”kuphela oza kwenza ukuba anxiety worse. Dibanisa, wena musa ufuna ukuba abe guy ngubani ebone hesitating okanye worse the guy abo hovers jikelele a kubekho inkqubela. Girls isaziso ukuze kwaye ingaba instantly ngumdla. Endaweni yoko, nantsi into omawuyenze xa ubona a kubekho inkqubela nisolko anomdla: Thobela”u-wesibini”umthetho kwaye ngokulula hamba indlela i kubekho inkqubela kwiintsuku ezimbini imizuzwana ka-ndibona yakhe. Ehamba phezulu, ukuze kubekho inkqubela ngaphandle nkqu ukucinga kuya hayi kuphela yenza ujonga ngakumbi uqinisekile, kuya kuthintela ukuba indlela anxiety ukusuka ukuthathela phezu kwabo. Kunjalo, iyama a kubekho inkqubela kwi street ngu ke jonga ezahlukeneyo kunokuba ehamba phezulu, ukuze kubekho inkqubela e a bar. Ukuba ukhe ubene anomdla iyama nokuqala incoko kunye abafazi kwi street, nantsi indlela yokwenza oko: Kwi end, iyama a aph kubekho inkqubela kwi street akukho ezahlukeneyo kunokuba iyama umntu ukuba balahleka kwaye kufuneka izikhokelo. Kuphela umahluko kukuba endaweni ikhangela izikhokelo, nisolko nje ukujonga kuba eyobuhlobo incoko (oko nje babe kukhokelela umhla). Ukuba ufuna musa bazive ethambileyo jumping kwi banter kunye umfazi ngasekunene ngaphandle i-bat, ngoko ke nje kuthi nokuba uziva ethambileyo esithi. A genuine compliment okanye elula”Molo, ndiza _____”unako qalisa incoko kunye umfazi ngaphandle nje kakuhle. Ilanlekile ka-guys bacinge ukuba kufuneka dazzle umfazi ilungelo kude kunye an amazing yokufunda umgca.
Inyaniso kukuba, abo musa
Ezi guys izakuba surprised ngexesha nje njani oku kuchaphazela uhlobo authenticity enako. Attitude unako uhambo ezininzi guys phezulu. Ilanlekile ka-guys abo ezisebenza nge kubekho inkqubela kuba i-attitude”ndiyathemba lento kubekho inkqubela likes kum”okanye”ndiyathemba ukuba ufumane inani”. Guys abakhoyo ukuvunywa-ezama kwaye sikazwelonke-dependent kufika kuwo njengoko lacking ukukholosa kwaye ukuba attitude unako rub a kubekho inkqubela ezingachanekanga indlela. Endaweni yoko, ufuna ukugcina a eshushu, vibe kulo lonke ndibano. Xa intlanganiso a kubekho inkqubela, ufuna ukuba unayo i-attitude noku imigca”ndiza comment, nisolko comment yonke into ke comment”. Ekubeni a fun, care-free attitude ngu ke get yakhe ukuqala ndinovelwano ukuba indlela kakhulu. Ukuba ungafumana kubekho inkqubela ukuva okulungileyo xa yena ke uthetha kuwe, ngoko ke yena ke ufuna ukhe jikelele kaninzi. Yaye uyayazi Unguye ka-Charm sele entsha ekwi-intanethi coaching iinkqubo woloyiso indlela anxiety Cofa Apha ukuze Ufunde Ngakumbi uza ukufunda zethu phezulu izicwangciso zokuphucula yakho career, ukukholosa, ukuzonwabisa, kunye nothando-ubomi ukusuka phezulu ingcaphephe ngathi ubomi kwaye ishishini-hackers. Qala Emamele Namhlanje Qala Emamele Namhlanje Unguye ka-Charm Bootcamp yi revolutionary esikolweni kuba abantu wadala nge iqela loluntu dynamics ingcaphephe ukuba kufuneka kuthathelwe amawaka guys ukusuka nokuqheleka ukuba ihlale ngexesha elingelilo lokuhlala. Funda Impumelelo Stories Ukufunda Impumelelo Stories”AOC,Unguye ka-Charm”kwaye”Unguye ka-Charm Esikolweni”ingaba ebhalisiweyo iimpawu zokurhweba ye-Unguye ka-Charm, Inc
← Incoko-China - zonxibelelwano kwi-ChatRoulette ngaphandle yobhaliso